On: २०७७ असार २० गते, शनिबार, ०२:२५ बजे प्रकाशित
रिदम सिंह, बझाङ
उद्धारका लागी जाँदै गरेको नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटनामा परेको छ। जिल्लाको केदारस्युँ गाँउपालिका वडा नं. ८ मेल्लेसी गाँउमा पहिरोमा परि ठुलो जनधनको क्षती भएपछि सोही ठाँउमा उद्धारका लागी हिडेको नेपाली सेनाको गाढी दुर्घटनामा परेको हो।
गाडीमा नेपाली सेनाका उपसेनानी शिव श्रेष्ठ सहित १५ जना सवार थिए। कालगा हाईड्रोको सुरक्षार्थ बागथला खटेको टोली उद्धारका लागी आउँदै गर्दा केदारस्युँ गाउँपालिका वडा नं. ४ बाग्थलामा दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी प्रवक्ता लोकेन्द्र सिंह कार्कीले जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले उद्धारमा आउनका लागी भाडामा लिएको से १ ज ४७७ नम्बरको जिप दुर्घटना परेको हो। गाडी सडक छेउमा पल्टिँदा नेपाली सेनाका ३ जना जवान घाइते भएका हुन्।
घाइते ३ जनाको स्वास्थ्य केन्द्र देउलेकमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जानकारी दिएको छ। गएराती जिल्लाको केदारस्युँ गाउँपालिका वडा ८ को एक बस्ती पहिराले बगाएको छ।
अविरल वर्षासँगै गाउँ माथिबाट आएको पहिरोले गएराति केदारस्युँ गाउँपालिका वडा ८ को मल्लेसीका १७ घर बगाएको हो। यस्तै उक्त पहिरोमा परी बेपत्ता भएका मध्ये ४ जनाको शब भेटिएको छ भने ३ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
मृत्यु हुनेमा ५० बर्षिया राममती जेठारा, उनका ११ बर्षे छोरा प्रयाग जेठारा र ७ बर्षे छोरी अस्मिता जेठाराको शव भेटिएको हो। साथै सोही गाँउका अन्दाजी ८० बर्षिया दले जेठाराको पनी शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जानकारी दिएको छ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: पहिरोमा पुरिएर बाजुरामा १ बालकको मृत्यु, १ घाइते
२०७७ असार २० गते, शनिबार, ०२:२५ बजे प्रकाशित